Xisbiga Qaransoor Wuxuu Sanadguuradii 22-aad ugu Hambalyeynaya Dhamaan Bulshada Soomaaliyeed ee Dawladd Gobolleedka Puntland - Xisbiga Qaransoor
1,254 Tirada Xubnaha
Xisbiga Qaransoor Wuxuu Sanadguuradii 22-aad ugu Hambalyeynaya Dhamaan Bulshada Soomaaliyeed ee Dawladd Gobolleedka Puntland
Maanta waxaa laga jooga 22 sano wakhtigii la aasaasay dawladd gobolleedka Puntland oo run ahaantii wakhtigaas ahayd tallaabo wanaagsan ee lagu doonayay xassillooni siyaasadeed, bulsheed iyo mid dhaqaaleedba. Xisbiga Qaransoorna waa uu boggaadinaya maamulka waxqabadyadii wanaagsana ee uu qabtay muddadii lasoo dhaafay sida dhismaha nabadda, hormarinta adeegyada waxbarasho iyo caafimaad.
Nasiib darrose, Xisbigu wuxuu cambaareynayaa xadgudubka hay’adda fulinta ay ku hayaan hay’addaha garsoorka iyo sharcidejinta. Wuxuu xisbigu usoo jeedinayaa shacabka Puntland in wakiiladdooda ay la xisaabtamaan si markaas iyagana sida si lamid ah ay ula xisaabtamaan xukuumadda markaas jirta.
Xisbiga Qaransoor wuxuu kaloo cambaareynaya telefishinka puntland, oo Puntland u aqoonsan dawladd madaxbanaan. Waxaan fareynaa ciddii ay khuseyso in khaladaadkan ay saxaan. Puntland waa dawladd Gobolleed kamid ah Dawladda Federaalka Soomaaliyeed.
Xisbigu wuxuu kaloo walaac farabadan ka muujinaya nidaamka xisbiyada badan uu maamulka ku tallaabsaday, oo run ahaantii dhiiragelin kara musuqmaasuqa madaama maamulka uusan wakhtigan lahayn hay’add madaxbanaan oo la dagaallanta musuqa.
Xisbigu wuxuu farayaa in maamulka uu la dagaallamo musuqa.
Xisbiga isagoo tixraacaya tallaabooyinka Maamulka, Wuxuu maamulka xusuusinaya in dastuurka ku-meelgaarka uu awoodd madaxbanaan usiinayo Dawladda Federaalka in ay maareeyso siyaasaddaha arrimaha dibadda, lacagaha iyo difaaca, Sidaa awgeed xisbiga wuxuu farayaa maamulka inuu tixgeliyo shuruucda dalka u taalla.
Ugu danbeyn, Xisbigu wuxuu dhamaan madaxda soomaaliyeed ka codsanayaa in midnimada, wadajirka iyo horumarka bulshada laga hormariyo dan walba oo siyaasadeed.
Qoraalada xiisaha leh
WAR SAXAAFADEED “Waa nasiib xumo in dhiig la daadiyo.”
War saxafadeed: DIGNIIN iyo talo soo jeedin
War Saxaafeed: Khilaafka doorashada – 2021
War saxafadeed: Dagaalka Balad Xaawo
Xuquuqda Dhalinyartu Waa in La Dhawraa
Xisbiga Qaransoor Wuu Soo Dhaweeynayaa Heshiiska ay DF iyo Dawladd Gobolleedyada ay ka Gaadheen Arrimaha doorashooyinka 2020/21
“Cadawgeenna iyo Halgankeenna”
Xil Magacaabis: Madaxa Siyaasada Arrimaha Gudaha
Xisbiga Qaransoor Wuxuu Tacsi Tiiraanyo Leh u Dirayaa Dhammaan Ummada Soomaaliyeed iyo Ehelada iyo Qaraabada ay Ka Geeriyootay Illaahay Ha u Naxariistee Dr. Xaawo Cabdi Dhiblaawe
Xisbiga Qaransoor (Q) ayaa raba inuu dalka ka hirgeliyo dib u habeyn siyaasadeed oo cusub, inuu la yimaado fikir iyo dhaqdhaqaaq dhiirigeliya danaha ummada, helitaanka iyo jiritaanka qarannimada ummada Soomaaliyeed.
Xisbiga Ku Saabsan
Wararka ugu danbeeyo
+252 61 4555333
Waabari waaxda Horseed kasoo horkeedka laanta Axmed Gurey Dabaqa labaad dhismaha Somnet wadada Maka Al-mukarama. Mogadishu, Soomaaliya (SO)
Copyright © 2020 - 2025 Qaransoor. Dhammaan Xuquuqda si Gaar ah Ayaa Loo Leeyahay Haddaan Si Kale Loo Cayimin.
Waxaan u adeegsanaa cookies ka si aan kuu siino khibrada ugu wanaagsan ee isticmaalka. Cookies waxaa loo isticmaalaa in lagu falanqeeyo taraafikadayada, hagaajinta boggaga internetka, in aan ku siino waxyaabaha ku jira iyo xayeysiisyada sida taabasho shaqsiyeed, iyo in lagu bixiyo howlo la xiriira warbaahinta bulshada.